One Stop Plastic Inaliti Ikubumbe kunye neNkonzo Ulwenziwo lokuthile
Image Box umbhalo
CBPMM unamathela kwimilinganiselo umgangatho amazwe kwaye le ISO 9001: 2005 kwezatifiketi leyo kubonisa isiqinisekiso yethu esemgangathweni.
Sinikezela iimveliso ezahlukeneyo ukuze abathengi ezibandakanya isitofu zeplastiki sukube, udini izithuthi, ukwenziwa ngumngundo zeplastiki, cap zeebhotile ukubumba, ukwenziwa ngumngundo elektroniki, ufe bephosa, ikhaya zombane ngumngundo, unyango ekwenziweni ukungunda, kunye nokwenza ngumngundo ipipi.
Sisebenzisa zakutshanje oomatshini karhulumente-of-the-art iinkqubo kunye nemveliso ukuqinisekisa imveliso egqwesileyo kubathengi lethu lixabisekileyo. CBPMM unako ukuvelisa imveliso ukuze kukhawulelwane neemfuno umthengi ethile kwaye ungafumana ukuba zisiwe kubo ngokukhawuleza.
Siyazingca, baqeqeshwe, yaye abasebenzi abaneziqinisekiso kakhulu kakuhle. Thina amandla ukuhlangabezana quotas kwisithuba seeyure ezingama-24 kwaye zinike isampuli ye ukungunda zeplastiki ukuba abathengi kwisithuba seentsuku 3-5.
Iqela of izifundiswa CBPMM aqeqeshwe kakhulu yaye ilifa izakhono ezaneleyo ukuqonda iimfuno baxhamli endle isitofu zeplastiki jize ngesithsaba asithabathele wona zingaziswa kwisithuba seeveki ezimbini.
Le abathengi angathembela labasebenzi bethu obumangalisayo ukuhlangabezana odolo zazo saye phakathi kwexesha elibekiweyo.
Kwakhona siyaqonda ukhuphiswano kunye nexabiso sensitiveness zamashishini sokubumba yokuvelisa zeplastiki kwaye ngenxa yoko, siya intengo iimveliso zethu ngempumelelo. Sikholelwa ekunikeni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubaxumi bethu ngamaxabiso afanelekileyo ukwakha nokukhulisa ubudlelwane bexesha elide kunye nabo. Nje intengiso azikho injongo yethu ephambili, kunokuba thina ingqalelo ekunikeni inkonzo yomxumi ngokukhawuleza kwaye olusabelayo.
CBPMM izimisele ekuqinisekiseni ngokwaneliseka leyo eya kusinceda bokufumana nokukhulisa isiseko sabathengi bethu.
Automotive Iintetho • Umngundo
Medical Part zomngundo
Pipe zomngundo Lokulinganisa
Imvaba Cap Ukubumbela
Ekhaya Imishini Ukubumbela
Motorcycle Izahlulo Ukubumbela
Amaxabiso Factory Original
Ishishini lemveliso zeplastiki sokubumbela amaxabiso kakhulu sensitive. Lwentengo onefuthe esiphambili eziphembelela isigqibo sokuthenga umthengi lowo. Siyaqonda ezi zabafaki shishino kunye namandla amaxabiso yaye ngaloo ndlela zinika amaxabiso kakhulu ukuba abathengi.
Sinikezela kubo original amaxabiso mveliso leyo kukhuphiswano kakhulu okhuphisana. Hayi kuphela inokhuphiswano kakhulu iimveliso zethu ngexabiso, kodwa nazo ezikumgangatho ophezulu kakhulu. Oku kudala Ukuhlangana ifanelekileyo iimveliso ezikumgangatho ophezulu zibekwa ngamaxabiso aphantsi kakhulu leyo kusinceda umahluko nabo kolu khuphiswano.
zokuxabisa kwethu lusenza ezithandwayo phakathi abathengi kwaye kusenza sihlale phambi okhuphisana nawo.
CBPMM isebenzisa zakutshanje kunye oomatshini kunye nemveliso iinkqubo zikarhulumente-of-the-art. Isixhobo mihla ezisetyenziswa kuqinisekisa umgangatho iimveliso zethu. Sisebenzisa advanced oomatshini njenge-high speed yokugaya,-axis ezintlanu iziko machining, electric ukubhobhoza machining, CNC nokukrola umshini wokugaya, umpu zokomba njl
Oomatshini yethu kunye neenkqubo zokuvelisa eliphezulu kakhulu kwaye kakuhle ukuvumela ukuba bavelise iimveliso umgangatho kwi kakhulu ngokukhawuleza . Eziqhayisa ekunikeni ezibolile zeplastiki isampuli kubaxumi bethu ngeentsuku 3-5 ukuhlangabezana zincwadi yokugqibela imveliso ngeeveki 2.
iinkqubo zethu zemveliso advanced kusinceda sihlale phambili kukhuphiswano sinokhuphiswano kwezemveliso kakhulu.
Singcolile Client Base
Ukuba omnye abenzi phambili umngundo zeplastiki eTshayina, CBPMM abe isiseko client ezahlukeneyo singcolile. Siye ukholose ngabaxumi Chinese kodwa abathengi zehlabathi.
Ezinye iinkonzo zethu axabisekileyo ziquka Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, General Motors, Ford, Ziyi, Volkswagen njl Ngokusebenzisa ngamadini ethu umgangatho imveliso, amaxabiso wokhuphiswano, inkonzo ebalaseleyo emva-intengiso, kunye nendlela umthengi-phambili, siye wakha igama kunye negama thina.
Abaxhasi bethu avume oku kwaye rhoqo babonisa ukholo lwabo kuthi, nto leyo kakhulu ezanelisayo kuthi. Siye sadibana iimfuno umxhasi wethu qho ezinzileyo kule minyaka nto ke leyo ebangele ukuba kuqhubeka ukwenza ushishino kunye nathi.
Ezahlukahlukeneyo Service Ukubumbela
CBPMM inika iintlobo ezahlukeneyo ngeenkonzo inaliti ngumngundo zeplastiki kubathengi bayo. Sinikeza ngeenkonzo ezifana sukube zeplastiki ngenaliti, udini izithuthi, ukwenziwa ngumngundo zeplastiki, cap zeebhotile ukubumba, ukwenziwa ngumngundo elektroniki, ufe bephosa njl
Sinikeza inkonzo enokuthenjwa esenziwa components ngqo kakhulu kwaye ziyafana kwindawo ngexabiso elifanelekileyo kakhulu.
Phantsi isitofu sukube zeplastiki, sinikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezifana sukube thermoplastic ngenaliti, phezu ukubumba, kubanda imbaleki inaliti ambumbe, hot imbaleki inaliti yokubumba njl
Wawabona Abaphathi Sales
Abaphathi intengiso e CBPMM bawenza kakhulu kwaye baqeqeshwe kakuhle ukuqonda iimfuno umthengi aze ahlangule iimveliso lwexabiso bahlangabezane nezidingo zabo.
Thina eziqhutywa kwinjongo ukubeka baxhamli beenkonzo core yeshishini lethu. Zethu abaphathi intengiso ukuba wayeyazi kakuhle IsiNgesi kwaye ukuthetha ngokutyibilikayo kunye baxhamli IsiNgesi.
Oku inika abathengi kunye lula ukunxibelelana ngolwimi lwabo lweenkobe kunye nathi. Isinceda ukuba ukufikelela ku ebanzi kwisiseko abaxhasi inkonzo kubo ngendlela efanelekileyo ngakumbi ngaloo ndlela ukuqinisekisa inkonzo ngempumelelo kwaye ngexesha elifanelekileyo abathengi ngolwimi lwabo alukhethayo.
Great Emva Service Sales
CBPMM bekusoloko inkampani umthengi phambili. Usukelo lwethu ethengisa imveliso kuphela ngumthengi, kunokuba ukubonelela ngenkonzo lokuthengisa achazayo emva kwabo nazo.
Sikholelwa ekuphuhliseni nokukhulisa ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu ukuze ngokuqhubekayo kubuyela kuthi iimfuno zabo zeplastiki ngumngundo mveliso.
Zethu emva kokuba iqela intengiso sibonelela ngenkonzo ekhawulezileyo ngeemeko ukuba umthengi kuyo nayiphi na imveliso okanye imibuzo enxulumene abasukuba emva kokuba uthenge imveliso yethu. Sizamela ukunika epheleleyo kunye ebanzi inkonzo emva-yokuthengisa abathengi bethu ukuze babe noxolo okupheleleyo kwengqondo xa uthenga iimveliso zethu.
Copyright 2020 © CBPMM eKhaya